I-Waterfront, iGem-Friendly Gem ene-WiFi, iDokhi, iBoat Access, iGrill, & neDokhi yaBucala
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguVacasa
Iimbono eziphefumlayo phambi kwechibi, iidekhi ezininzi, ukufikelela kwisikhephe, kunye nehektare yemithi ephakamileyo sisiqalo nje sokuba kutheni iBrooks Lake House kufuneka ibe likhaya lakho elilandelayo kude nekhaya.
Umphandle uya kukutsala phambi kokuba ungene ngaphakathi; wakube uvula ucango lwangaphambili, uya kubuliswa bungaphakathi obuqaqambileyo obumangalisayo, ifanitshala yale mihla, kunye nolonwabo, i-decor ephefumlelwe echibini eya kukufumana kwingqondo yeholide epholileyo. Ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-grill grill iya kukunceda ukuba ubethe nantoni na ukusuka kwi-hamburgers ukuya kwi-gourmet foods, ngoko awuyi kuba nexhala malunga nokuphuma ukuya kutya ubusuku ngabunye. Ngaphezu koko, umoya omtsha uya kuba lula ukuwufumana, kunye neekayak ezimbini ezinikezelweyo zokukhupha emanzini kunye neendawo ezininzi zokuhlala kwiidesika ukuze ujabulele njengoko ukhumbuza isiselo esibandayo emva kosuku olupheleleyo lokuhamba ngenqanawa.
Xa kuziwa ekuzinziseni, igumbi elinye lokulala liphezulu kwaye amabini abekwe kumgangatho osezantsi, ukuze wonke umntu angonwabela indawo ethile. Nceda uqaphele ukuba elinye lamagumbi amabini okulala asezantsi lifikeleleka kuphela kwelinye igumbi.
I-WiFi yasimahla enesantya esiphezulu
Izinja ezimbini zamkelekile ngentlawulo yasebusuku
Iilwandle ezintathu zabucala. Nceda uqaphele: Amanzi echibi anokuba phezulu kakhulu ngoMeyi nangoJuni, ngeli xesha iilwandle zinokuntywiliselwa
Iikayak ezimbini zinikezelwe
Amanqaku okupaka: Kukho indawo yokupaka yasimahla yezithuthi ezi-3. Indawo yokupaka iyafumaneka endleleni izithuthi ezingapha kwe-3
Iinkcukacha zeDokhi: Idokhi yabucala 12'x24'
I-air conditioning ifumaneka kuphela kwiindawo ezithile zekhaya.
Ukupheliswa komonakalo: Ixabiso lilonke lobhukisho lwakho lwesi sakhiwo luquka umrhumo wokurhoxisa umonakalo oquka ukuya kuthi ga kwi-$2,000 yomonakalo ngengozi kwiPropati okanye imixholo yayo (enjengefenitshala, izixhobo, kunye nezixhobo zombane) ukuba nje wena xela isiganeko kumamkeli phambi kokuba uphume. Ulwazi oluninzi lunokufumaneka kwi "Imithetho eyongezelelweyo" kwiphepha lokuphuma.
Umbuki zindwendwe ngu- Vacasa
Izimvo eziyi-2 027